Lammaa Magarsaa: 'Ciniinsuun Oromoo akka dhalatuuf malee akka gatatuuf mana hinbaane' - BBC News Afaan Oromoo
Lammaa Magarsaa: 'Ciniinsuun Oromoo akka dhalatuuf malee akka gatatuuf mana hinbaane'
Ministirri Raayyaa Ittisa Biyyaa Obboo Lammaa Magarsaa waliigaltee dhaabbilee siyaasaa gidduutti kaleessa mallataa'een booda dhukkubni Oromoo nu gidduu jirti jedhaniiru.
Jaarmiyaalee siyaasaa kun qindoominaan hojjechuu akka danda'an qaama 'Gaaddisa Hoggansa Oromoo' jedhu kan hunddeessan yoo ta'u, Korichas Ministira Raayyaa Ittisa Biyyaa obbo Lammaa Magarsaatu qindeessa.
Obbo Lammaan dhimma waliigaltee kanaafi dhimmoota Oromoo waliigalaa irrattii addattii ibsa kennanii turaniin yaadawwan asiin gadii kaasaniiru.
''Jaaramiyaan Oromoo hundumtuu yaadaa fi miira gaariidhaan waan saba keenyaaf hin ta'a jenne hundarraatti mari'achaa turre'' kan jedhan Ministirri raayyaa Ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa, wanta hundi xumurameera jechuu baannus sadarkaa amma irra geenyeen, wanti gaariin ni dhufa jennee yaanna jedhan.
Wanti biyya kana keessatti ta'aa jiru dhimma paartii tokkoo ykn lamaan oliiti. Hooggansi Oromoo hin guddanne ni quucare malee. Sabatu nu bira darbee jira jedhan.
Kaleessa qabsoon Oromoo gaafa jalqabu paartii tokko lamaan jalabee, har'a 20 ta'uun isaa ni guddate osoo hin ta'iin ni bittinaa'e.
Paartiin Oromoo akkasitti bittinaa'uun Oromoo qoodee diiga malee hin guddisu. Kanaafuu dubbii kana dhaabatanii ilaaluun yeroo kamiyyuu caala amma nu gaafatas jedhan.
Erga qabsoon Oromoo wareegama hedduun dhufee gidduu gala biyyaa gahee, gidduu gala biyyaa kana akka inni oolee bulu taasisuun dirqama dha. Kanaaf ammo waan nutti dhufaa jiruufi ta'aa jiru wal hubachiisuun barbaachisaadha.
Ajandaan keenya uummata Oromoo hanga ta'etti nutti tolus nutti toluu baatees waliin ta'aanii haasa'uun baayyee barbaachisaadha.
Qabsoon keenya guddateera Oromoof wanti gaariin dhufee jira, garuummoo kanuma keessatti namni keenya nu harkatti miidhamaa jira.
Oromoon dararamaa jiru, Oromoon du'aa jiru, gola Oromiyaa keessattii dhiigi Oromoo dhangala'aa jiru ammalee akka laayyootti kan ilaalamu miti. Hooggantoota siyaasaa fi namoota biyyaa bulchaa jirutti kun nutti hin dhgaahamu yoo ta'e, kun salphinaafi yakka guddaadhas nuuf jedhan.
Qaabsoo dhaabbileen hunduu xaaranii asiin gahan kun firii akka godhatu, Oromoo lafa dhaabeef tasgabbii fi jijjiirama hin fidu yoo ta'e gatii hin qabu. Teenyee haa ilaalluu dubbii kana haa fixannu jedhan.
Dhukkubni Oromoo nu gidduu jirti
Dhukkubni Oromoo nu gidduu jirti. Har'a diinni Oromoo hin jiru. Nutu diina Oromoo ta'aa jirra. Harka keenyattii erga dhiigni Oromoo dhangala'ee, lubbuun Oromoo darbee, diinummaan Oromoo kanaa olii hin jiru.
Oromoof fala fiduuf nuti dubbii keenyaa fixachuun barbaachisaadha jennee lafa jalas dhuunfaadhaniis mari'achaa turre. Amma qalbiin gaariiin jira. Anaafis onnee natti horee jira. Akka kan duraa wal himachuurraa baanee akkamittiin saba kanaaf fala haa finnu kan jedhurratti mari'achaa baane jedhan.
Mee garaagarummaa keenya fidaa jennee garaagarummaa baayyee dhabne. Hundi keenyayyuu kophaa kophaatti ati Oromoof maala yaadda jedhamnee gaafatamne, gaafa walitti fidan hunduu tokkuma. Kanaarraa garaagarummaa madda rakkoo ta'e dhabnee jedhu.
Warri mootummaa taanee jirrus dhabbiileen biroos waan Oromoon hin barbaanne dura dhaabachuun nurra hin jiraatu. Akka fakkeenyaattis Oromoon alaabaa kana, seera kanan barbaada yoo jedhe inni kaan maaf dura dhaabataa? jechuun gaafatu.
Walitti qabamnee sagal walii kakanneefis falli hin dhufu. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti sagal walii kakatamee meeqaatu diigamaa dhufe kan jedhan Obbo Lammaan, jaarmiyaaleen Oromoo cimanii yoo adda cimaa tokko iijaarratan gaarii ta'aa jedhaniiru. Sun adeemsa keessa dhufas jechuun himaniiru.
Oromoon biyya kana keessatti firaafi diina adda baasee baree waan isaa malu argatee jiraachuuf tokko ta'ee deemuutu irra jiraata. Amma kana kaawwannee jirra hojii manee keenya ta'aa jedhaniiru.
Filannoofi jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo
Waayee filannoo kan kaasan Obbo Lammaan, paartileen Oromoo baayyatanii jiraachuun sagalee Oromoo gargara hiruun bakka bu'aa paarlaamaatti erguuf yoo gargaare malee mootummaa ijaaruuf hin dandeessuus jedhan.
''Chirichaaroodhan paartii 20 fi 30 qabannee fedha fi dantaa Oromoo kabachiisuu hin dandeenyu''
Filannoo dhufurratti dhaaba garaagaraa taanus sagaleen Oromoo akka hin harcaane akkamittiin haa sochoonu kan jedhurratti akka hojjetamuus dhaamaniiru.
Waliigaltee kana waaraa gochuuf...
Maatiidhuma keessayyuu ilmi dabaan jira kana jedhan obbo Lammaan, seera ittiin waliin hojjetaniififi bitamaniif qabaachuu akka feesisu akkasumas abbaan seeraa ammo Oromoo akka ta'uu qabullee himan.
''Gara tokkotti dhufnee waliin hojjechuu qabna osoo jennuu akka sangaa didaa tokko bahee falaa fi daandii biraa barbaada yoo ta'e Oroomoon adabuu qaba. Eenyuu keenyaafu gurra kennuu hin qabu.''
Bittinaa'un keenya keleessas nu darareera har'aas du'aatii nurraa hin dhaabne.
Qeerroon, Hayyuun, Sabni Oromoo guutuun daanyaa cimaa ta'ee nu qabuu qaba jedhan.
Kana dura kakuu cabsuun akka turehimanii inni alanaa akka sana hin ta'uu abdii jedhu akka qabanillee dubbatan.
Oromoon har'allee ciniinsuu keessa jira. Ciniinsuun kun yookii ni dhalata ykn ni gatatata jenne. Lamaanuu kan gochuu danda'u nuyi jenne waliigalleerra. Kan manaa baaneef ammoo akka inni dhalatuuf malee akka gatatuuf waan ta'eef akka inni dhalatu gochuu qabna. Kanaaf ammoo sabniifi hayyuun keenya nu gargaaruu qaba jedhaniiru.
'Qabsoo ABO buleeyyiin taasisan nu biratti galata guddaa qaba'
Hunduu Oromoof gatii waan kanfalaniif, jaarmiyaan siyaasa Oromoo gatii hinqabu jedhamee cinaatti gatamu tokkoolleen hinjiru.
Wanti xixinnoon nutti hin tollellee jiraatanillee dantaa Oromoo isa hegeree ilaalaa wal danda'uun hojjachu qabna jedhaniiru. Siyaasa jechuun wal danda'uudha. Hundi keenyaa madaa hedduu qabna garuu Oromoof jecha ni bulfanna jedha.
''Ijoollee keenya nus mufachiifneerra yoo ta'e, wal mufachiisee kanneen bosona jiranillee yoo ta'e, jaarsoliifi beektoonni, abbootiin amantaa keenya nama sadaffaa osoo hin dabalatiin nuti teenyee fixachuu dandeenya'' jechuun waa'ee qaamolee hidhatanii socho'aa jiran waliin nagaa buusuuf yaada qaban dubbatan.
Adeemsa kana keessattis hawaasichi akka isaan gargaaruullee gaafataniiru.
Lammaa Magarsaa Ministira Ittisa Biyyaa, Gadduu Andaargaachoo Ministira Dhimma Alaa tahuun muudaman.